10 Kunze-Mwaka Kwekufamba Nharaunda Pasi Pose | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Kunze-Mwaka Kwekufamba Nharaunda Pasi Pose
Rovedza Kufamba Austria, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba Switzerland, Travel Europe
Kusvika pakuziva veko pasina mapoka evashanyi vakatarisa pamusoro pefudzi rako uye vachirova iyo yakanaka diki cafe, idzi Nzvimbo dzeKufambira-Mwaka Yekufamba Pasi Pose ndidzo dzakanakisa kuzororo risingakanganwike.
1. Kunze-Mwaka Kwekufamba Nzvimbo: Ireland Muna Gumiguru
Yakashongedzwa negoridhe, mhepo inoyerera, iyo yekuIrish runako rweWicklow Mountains, chinhambwe chipfupi kubva kuDublin uye unosvika panzvimbo yakanaka. pano, chero nzira yekufamba musango inokutungamira kune anoshamisa mapopoma, epic maonero, uye nedenga rebhuruu kana Glendalough mupata uye zana ramakore rechitanhatu medieval monastic settlement.
Imwe bhenefiti yekushanyira Ireland isiri-mwaka ndiyo mukana wekunakirwa pint yeGuinness kunzvimbo yemunharaunda, pamberi chaipo pemoto wakashama.
2. Italy Muna Kubvumbi
Kunyudza muMediterranean, kunhonga truffles, uye akanaka kudonha mashizha, Italy ndiyo yekupedzisira isipo-mwaka yekufamba nzvimbo muna Kubvumbi. Chitubu inguva yakanakisa yekushanyira Italy senge tembiricha, unyoro, mitengo, uye mapoka evanhu anoderera.
Wese munhu anoda kuzororo muAmalfi Coast, kana pakati pemazambiringa muTuscany. zvisinei, inodhura uye yakatsvikinyidzana muzhizha, mwaka wepamusoro. saka, muna Kubvumbi kuenda kuItari kure-mwaka inguva yakanakisa yekuenda.
3. Kunze-Mwaka Kwekufamba Nzvimbo: Loire Valley France Pakati Pakati paGunyana
Autumn dahlia inotumbuka, mhepo yakachena yemakomo, matsutso mashizha, uye mhepo ine simba pamazuva anodziya, iwe uchawana Loire Valley yemwaka iri kurota kwakazara. Iyo inonakidza nyika yekuFrance inozivikanwa nechena waini, uye nguva yekukohwa inotanga kutanga pakati paGunyana.
saka, nguva yakanakisa yekufamba kuenda kuLoire iri munaGunyana, kupera kwemwaka wepamusoro. Iwe uchazviita kuChateau de Chaumont Garden festival, mutambo wemadomasi kuChateau de la Bourdaisiere, uye Festivini nemutambo wayo mukuru paFontevraud Abbey. Howa hunotora mumapako anotonhorera, kana kukwira makwande kana tembiricha ichidzikira, asi mazuva achiri akareba aine akawanda masikati machena – Loire Valley inoshamisa inosvika-mwaka yekuenda munaGunyana.
Dijon kuProvence Nechitima
4. Yakanakisa Off-Mwaka Yekufamba Nzvimbo MuGerman: Munich MunaGunyana-Gumiguru
Pasinei nezita rinotsausa, mutambo mukuru wedoro unotanga munaGunyana. Oktoberfest chikonzero chinoshamisa chekufamba kuenda kuGerman, uye kuguta kwarakabva, Munich. Panguva ino, iwe uchawana iro guta mune nyonganiso uye Munich ine makuru vibes.
Kunyangwe izvi zvichireva kuti iwe unowanzo kuve wakakomberedzwa nevashanyi, kunyangwe isiri mwaka wepamusoro. Izvo zvichiri kukosha kuenda kuMunich off-mwaka munaGunyana, kungoona mashiripiti eOktoberfest.
5. Kunze-Mwaka Yekufamba Nzvimbo MuChina: Shanghai MunaNovember
Nehuwandu hwevanhu 26 vanhu vane miriyoni, iwe uchagara uchizviwana uri muboka revanhu muShanghai. zvisinei, kuenda off-mwaka kuShanghai zvinoreva kuti vashanyi vadzoka kumba kubva kwavo zororo rezhizha, saka unenge uri kusanganisa nevanhu veko.
Uyezve, mamiriro ekunze muShanghai anowanzo kuve anodziya uye mwando skyrocket, saka zvimwe zvechikonzero chekufamba-mwaka uye kuyemura skylines yeShanghai munaNovember. Gumiguru-Mbudzi inguva muShanghai apo hunyoro, pokugara, uye mapoka evanhu anodonha. Nenzira iyi iwe unozobatsirwa zvakanyanya kubva kuguta rinonakidza uye rinoshamisa.
6. Kunze-Mwaka Kwekufamba Nharaunda Pasi Pose: Andalusia Spain MunaGunyana
Ne fiesta uye mutambo unenge mazuva ese, iyo yakanaka uye inonakidza Andalusia dunhu kurota munaGunyana. Kubva pamutambo wekukohwa waini kuenda kune zvekudya zvegungwa uye kusukisa pamhenderekedzo yegungwa - kupera kwaGunyana ndiyo nguva yakanakisa yekushanyira Andalusia.
Ipo Nyamavhuvhu kusvika kwekutanga kwaSeptember kuchiri kudziya, mukupera kwaSeptember unogona kuwana mukana wemvura, kana zuva rakajeka pamhenderekedzo-akakwana mazuva, asi kwete kusvika padanho iwe rausingakwanise kufema kana kufamba-famba uchitenderedza akanaka maguta eAndalusia. kusvuta mazuva anopisa. saka, Andalusia ndiyo yakakwana yekuenda-mwaka kuenda kuSpain mukupera kwaGunyana.
7. Algarve Portugal Pakati Pakati paGunyana
Algarve inoshamisa gore rese, saka hapana nguva yakaipa yekushanya. Zvekushambira uye kutandara pamahombekombe akanaka muPortugal, uye uve nemahombekombe eAtlantic uye unozvivhara zvese, pakati paSeptember ndiyo nguva yakakodzera yekushanyira Algarve.
Ipo zhizha richidziya, ndiyo zvakare yakazara vanhu, uye munguva yechando, iwe uchasangana nemazhinji evashambadziri akakomberedza imwe yenzvimbo dzakanakisa dzevashambadziri pasirese. saka, Algarve ndiyo yakanaka yekusiya mwaka-pakati paGunyana kuenda. Iwe unozowana mukana usingawanzo kunakirwa neanoyevedza macoves, mawere, nemisha yehove iri mumahombekombe.
8. Kunze-Mwaka Kufamba KuVienna MunaGunyana
Chikafu cheStreet Viennese, waini, gin, kana chero cocktail yesarudzo yako zvikonzero zvinoshamisa zvekuenda kuVienna munaGunyana. Kunyange zhizha rave kuda kuenda, uye pamwe nayo mapoka evashanyi, asi veViennese vadzokera mutaundi uye ndozvakaitawo mhemberero huru.
saka, Vienna ndeimwe yepamusoro 10 off-mwaka yekufamba nzvimbo muEurope. Iwe unogona kusarudza pakati pekutora rwendo rwekufamba muminda yemizambiringa kunopemberera mune imwe yeakawanda mafaro uye mitambo muVienna chete munaGunyana uye zvevagari vemo chete. Iko hakuna imwe nzira iri nani yekufarira chikafu cheAustria, tsika nemagariro, uye runako rweVienna pane kusanganisa neveko.
Nguva pfupi nzvimbo isati yashanduka kuva yeruvara rwekuvhunduka uye nemisoro yakapfeka yadzo chena nguo, ari Swiss Alps mashiripiti asiri-mwaka. Pakarepo mushure mekunge vashanyi vazhinji vadzokera kumba, maSwiss Alps anodzosera mashiripiti avo ane rugare, kugadzira nzvimbo ye zviitiko zvekunze nemapikiniki.
saka, iyo Swiss Alps inoshamisa nzvimbo yekufamba-mwaka munaGunyana. Kunze kunodziya, denga rebhuruu rakajeka uye unogona kunakidzwa nekufamba musango, kuchovha, kuzorora uye kuongorora maonero akanaka. saka, unogona kukwira imwe ye makomo anoyevedza kwazvo muEurope Jungfrau.
10. Kunze-Mwaka Kwekufamba Nharaunda Pasi Pose: Paris Muna Zvita
Kufamba uchitevedza Champs-Alyeese, kana kuburikidza neTuileries Bindu kuenda kuLouvre pasina mapoka evashanyi chiitiko chinoshamisa muParis. Paris isiri-mwaka yakatonyanya kudanana kana iwe uchigona kufamba-famba kuburikidza neguta rinonyanya kushanya pasi rese, pasina vashanyi pamakona ese. Ipo zhizha richipa yakanakisa mamiriro ekunze uye zuva rine mazuva, Zvita iri rakanakira zororo muParis.
Kuenda kuParis off-mwaka muna Zvita chivimbiso chekushamisa maonero. Pamusoro pe, iwe unogona kuve nekuputika kune akawanda Misika yeKisimusi.
pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira kuronga rwendo rwako rwekusiya-mwaka kune idzi nzvimbo dzekurota pasirese.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Off-Mwaka Yekufamba Nzvimbo Dzinowanikwa Pasi Pose" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Foff-season-travel-locations%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)